Famolavolana mamaly sy ny teboka fitadiavana finday | Martech Zone
Ny iray amin'ireo antony nanosika anay hanangana ny tranonkalantsika amin'ny lohahevitra vaovao namboarina ho finday dia tsy ny tabataba rehetra nataon'i Google sy ireo matihanina tamin'ny habaka SEO ihany. Hitanay izany tamin'ny fandinihana ny tranokalan'ny mpanjifanay. Ao amin'ireo mpanjifanay manana tranokala mandray andraikitra, afaka nahita fitomboana be tamin'ny fahatsapana fikarohana finday izahay ary koa fitomboan'ny fitsidihan'ny fikarohana finday.
Raha tsy mahita fitsidihana mitombo ao amin'ny Analytics, mila manamarina ny angona webmaster ianao. Tsarovy, Analytics mandrefy ny olona efa tonga eo amin'ny tranokalanao ihany. Ny webmaster dia mandrefy ny fahombiazan'ny tranokalanao amin'ny valin'ny fikarohana - na ny mpitsidika dia tsindrio na tsia. Rehefa namadika ny mpanjifanay rehetra ho lasa tranokala mandray andraikitra izahay tamin'ny taona lasa, dia nanohy nahita fiakarana mahafinaritra amin'ny fivezivezena fikarohana izahay.
Ary mbola tsy vita ianao. Ny fandraisana andraikitra dia zavatra iray, fa ny fiantohana ireo singa ao amin'ny pejinao dia hohatsaraina ho an'ireo olona mikitika amin'ny ankihiben'izy ireo dia zavatra hafa. Google Search Console dia manome fampahalalana amin'ny an-tsipiriany momba ny tranokalanao sy izay ilainao hamboarina ho an'ny traikefa finday voatsabo.
Ahoana ny fanamarinana ny fahombiazan'ny fikarohana amin'ny finday
Ny fanamarinana ny fahombiazan'ny fikarohana finday dia tsy sarotra. Midira ao amin'ny Google Search Console, mandehana mankany Fikarohana fifamoivoizana> Search Analytics, ovao ny sivana sy ny datin'ny daty misy anao, ary ho hitanao ny fomban'ny tranokalanao. Azonao atao ny mijery ny tsindry na ny fientanam-po. Araka ny hitanao amin'ny tranokalanay, tsy niovaova izahay mandra-pahatongan'ny famolavolana vaovao mamaly vao haingana.
Aleon'i Google fotsiny ny famolavolana mamaly. Manaporofo izany ny fiverimberenan'ireo algorithma fikarohana isan-karazany rehefa mandeha ny fotoana, ary indrindra amin'ity fanovana farany ity. Ny famolavolana mamaly dia manamora ny fandehanan'i Google, ny fanondroana ary ny fandaminana ny tranokalanao. Download Marketo ny torolàlana farany momba ny marketing amin'ny finday ho an'ny fampahalalana fanampiny.
Infographic: Mandehana amin'ny finday ary mamaly… Na mody!
Tags: fikarohana finday googlegoogle webmastergoogle webmasters findaykaroka findayfanatsarana motera fikarohana findayfinday seoWebmaster